Nhau - Vagadziri veMold vanotarisana nekutora chizvarwa chinotevera
Vagadziri veMold vanotarisa kuunganidza chinotevera chizvarwa
Kufanana nemamwe akawanda emabhizimusi emabhizimusi, China Mold Manufacturers Association yakaunzawo zvirongwa zvine chinangwa chekukwezva vechidiki.
Nhasi, kutora chizvarwa chinotevera chevashandi chave chinhu chakanyanya kukoshesa vagadziri veChinese. Ini ndoziva izvi zvinonzwika kunge diki. (Pazera rangu, ndinoziva chaizvo kuti ndezvipi. Izvi zvinoratidza zvakare kuti ini ndakura uye handisisiri we "chizvarwa chinotevera".) MuChinese fekitori fekitori, zvakaoma kuona vakomana vadiki vakazvarwa mushure memakore makumi mapfumbamwe nemashanu, uye zvakare zvakashata. Enda kune boka revadzidzi vekudzidzira uye uteedzere tenzi kuti udzidze kuungana kweforoma uye kugadzirwa kweforoma. Iyi nzvimbo inogara irimo mundangariro dzeavo vakazvarwa muma1980.
Sechizvarwa chine makumi emakore echiitiko chebasa zvishoma nezvishoma chichienda pamudyandigere, indasitiri yepurasitiki yakatangawo kuve "yakura". Maitiro aya anokurumidza kwazvo mumunda wekugadzira chakuvhuvhu. Vagadziri veMold vanokurumidza vanoda kutsvaga vashandi vadiki uye vovachengeta mune ino indasitiri. Zvinogona kuonekwa kubva pane izvi kuti munguva yanhasi yekushomeka kwevashandi vane hunyanzvi, ivo vacharamba vachionekwa sevechidiki nezera ramakore makumi mana! Hongu, makore makumi mana ikozvino akaenzana nemakore makumi maviri ekuberekwa…
Uye zvakare, mamwe mafekitori emakambani eforoma ari kushandawo nesimba kusimudzira chizvarwa chinotevera chemitambo.
Uye zvakare, iyo thermoforming department reChinese Society yePlastics Injiniya yakagadzira masomo uye iri kushanda nesimba kutora vamwe vechidiki kuti vapinde muboka revatungamiriri. Mumakwikwi ehunyanzvi kuThermoforming Musangano mu2018, mota inotepfenyurwa neredhiyo yakagadzirirwa nevadzidzi vevadzidzi yakashandisa muviri wakaomeswa wakaomeswa-uri nani zvakanyanya kupfuura iyo "mudzidzi auto zvikamu dhizaini dhizaini" munguva yakapfuura.
Pamusangano wegore rapfuura, dhipatimendi re thermoforming rakarongawo hurukuro yeboka pamusoro pekutora vashandi vadiki "kutsvaga maunicorn" -Ndinovimba kuti vashandi vechidiki vane mukurumbira vanozove nyore kuwana pane maunicorn mungano.
Kutora chizvarwa chinotevera chevashandi idambudziko renguva refu, uye nhasi huwandu hwekushomeka kwemabasa muChina zvakatoipisisa. Kugadzirisa dambudziko iri kunoda kuenderera uye nhanho nhanho.